Isifo sika-Behçet ebantwaneni-Ingcebiso kunye nokhathalelo koomama banamhlanje | Oomama Namhlanje
Isifo sika-Behçet ebantwaneni
UAlicia tomero | 21/05/2021 14:00 | Unonophelo, ZeMpilo
Isifo se-Behçet sisifo esidumbisayo apho ingaziwa khona imvelaphi yayo. Ukubonakala kwayo kweempawu ukubonakala kwe-thrush (izilonda okanye izilonda) ezibonakala emlonyeni nakumalungu angasese. Ezinye iimbonakalo zi ukudumba emehlweni Olunye lweempawu eziphindaphindayo kwaye kunokubangela iingxaki ze-acuity ebonakalayo.
Kubalulekile ukufumana iimpawu kwangethuba, nangona kungelulanga ukuqikelela, njengoko umntu enokuba neziqendu zokudumba amaxesha angaqhelekanga kwaye angabinako ukunika iimpawu ezinzima. Akukho bungqina bokuba nakho yenza uxilongo ngokulula.
1 Ngaba isifo sikaBehçet senzeka ebantwaneni?
2 Yintoni ebangela isifo sika-Behçet?
3 Unyango lwesifo sika-Behçet
4 Iingcebiso kunye nokhathalelo lwemihla ngemihla
Ngaba isifo sikaBehçet senzeka ebantwaneni?
Esi sifo sixhaphake kakhulu kubantu bemvelaphi yaseNtshona kwaye rhoqo rhoqo kwabasetyhini kunamadoda. Iimpawu zokuqala ukuvela kwiminyaka engama-20 ubudala, xa umntwana sele emdala kwaye ukuxela kwangaphambili kunqabile kunikwa abantu abangaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala okanye kubantwana. Sisifo ke esinqabileyo esenzeka ebantwaneni ngezihlandlo ezinqabileyo.
Ngaba ikhe yafunyanwa ityala elizimeleyo nkqu nabantwana abaneminyaka emi-3, ngeempawu ezifunyanisiweyo ezinje ngokuchaphazeleka kwemithambo-luvo ye-ocular, kunye neziqendu zomkhuhlane, i-thrush yomlomo nalapho baxolelwe khona kwiingxaki ezonakalise inxenye yeoyile. Iimpawu neempawu zaba bantwana ziyafana Bathunyelwa kuye nabani na kwaye unyango lusekwe kumayeza afanayo.
Yintoni ebangela isifo sika-Behçet?
Inxulunyaniswa njenge-autoimmune syndrome, apho umzimba wenza izilwa-buhlungu ezihlasela amanye amalungu omzimba aziwa njengee-autoantibodies. Sisifo esinokutsha, apho zenzeka khona iziqendu zokudumba kumalungu ahlukeneyo omzimbakodwa hayi ekuphenduleni kwinto ekufanele ukuba yosulelo, tumors, okanye antibodies.
Kule meko, i-vasculitis iyenzeka, ukunyuka kwamaxabiso kwimithambo kunye nemithambo engabangelwa zii-autoantibodies. Nangona inxenye iimpawu zinokubangelwa utyekelo olubaxwayo lokudumba emzimbeni waba bantu.
Abantu abane Ukonyusa ubume bemfuza xa unesifo kwaye ngaphandle kwesizathu, kodwa ezinye izinto ezikhuthaza indalo zinokubangela ezi mpawu; okanye ukubonakala kosulelo luhlobo oluthile lwentsholongwane okanye ibhaktiriya. Iimpawu ze-Neurological kunye nokudibana, iingxaki zomthambo kunye nomthambo, kunye neengxaki zesisu zikhona.
Unyango lwesifo sika-Behçet
Esi sifo sinokubangela ukungahambi kakuhle okunokunyangwa ngokukodwa. Izilonda ezincinci kunye nezilonda zomzimba Banokunyangwa ngamayeza asentloko, iikhrim ezizodwa, okanye ii-corticosteroids.
Xa ingxaki ichaphazela ilungu lokubona kufuneka kwenziwe uvavanyo kwaye, apho kufanelekileyo, kusetyenziswe ii-corticosteroids okanye ezinye ii-immunosuppressants. I-Corticosteroids kunye ne-immunosuppressants ziya kusetyenziselwa iingxaki ze-neurological, vascular, joint okanye esiswini. Kuba thromboses lwemithambo okanye lwemithambo ii-anticoagulants ziya kusetyenziswa. Kwaye ukuba ukhona ii-aneurysms zemithambo ukusebenza kuyimfuneko.
Kumatyala agqithisileyo apho kungaphendulwanga kwezi zonyango ivavanywa ngeleukocytopheresis, equka ukufunxa ii-neutrophils egazini.
Iingcebiso kunye nokhathalelo lwemihla ngemihla
Xa esi sifo siqikelelwe, abaguli kufuneka babenolwazi ukusuka kukhathalelo ukuya kwiimpawu ezinokubakho. Ukwenza oku, uya kucelwa Yinyamekele impilo yomlomo ngokuchasene ne-thrush yomlomo.
Kufuneka unakekele ulusu ke awunampendulo idumbisayo. Kuya kufuneka uyazi ukuba uphilisa njani amanxeba, ukukrwela okanye ukubhoboza xa kusenzeka. Kwangokunjalo, kuya kufuneka usebenzise umqhaphu kunye nempahla engenaziqholo ukuze izilonda zangaphantsi zingabonakali.
Ukujongwa kugqirha wamehlo Kuya kufuneka ichaneke ukuze iinkqubo zokudumba zingenzeki. Kukwabalulekile ukunikela ingqalelo kwiingxaki zokujikeleza kwegazi.
Ukuthintela olu hlobo lwesifo akukho luqikelelo lubonisa ukuba luya kusokola, kwaye awunakufumanisa ukuba kutheni usiva ubunzima, Akukho luhlalutyo okanye ukumiselwa kwemfuza esinokuxela kwangaphambili isifo sika-Behçet, ke kuya kufuneka ukuba silwe kwaye senze uphando ngakumbi ukuze sikwazi ukusazi kakuhle ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » Isifo sika-Behçet ebantwaneni
Unyana wam ukhohlakele izilwanyana
Usana lwam luyacinezela